25 11 17 |
कविता : गल्ती -रमेश सायन हामीले प्रेम यसरी गरेका हौं! एक अर्काको गल्ति समेत फूल जत्तिकै कोमल लाग्थ्यो, माफि माग्थ्यौं ! माफी पाउथ्यौं! त्यो माफि बच्चाले ललिपप खाइरहेको जस्तो, वा दुनियाँ भुलेर खेलौनासँग रमाइरहेको जस्तो, सुन्दर हुन्थ्यो। जानेर वा नजानेर एक आर्काको मन दुखाउँथ्यौ, अनि.....
५ मंसिर, काठमाडौं । मुम्बईमा अनिल कोकरी नामक रेकर्डिस्ट थिए । कोकरीले केही समय नेपाली संगीतकार आलोकश्रीको काठमाडौंस्थित गुञ्जन रेकर्डिङ स्टुडियोमा पनि काम गरेका थिए । कोकरी र आलोकबीच मित्रवत सम्बन्ध थियो । ‘जगजीत सिंहसँग भेट्न कत्तिको गार्‍हो होला ?’ एकदिन आलोकश्रीले सोधे । ‘म मिलाई हाल्छु नि, आउनुस्.....